Milina tsy maty tsy mety maty: Ny tsiambaratelo ho an'ny fahombiazan'i Baltimore dia nandoto
Jona 27, 2013
“Nahoana araka ny eritreritrao no nahita fahombiazana toy ny seranan-tsambo i Baltimore?” manontany an'i Burt Kummerow, filohan'ny Fikambanana manan-tantara ao Maryland. Ny toerana misy azy manamorona ny Chesapeake Bay? Ny toetrandro antonony? "Tsia," hoy i Kummerow. "Noho ny milina fotaka tsy mety maty io."
Ah, ilay milina fotaka tsy mety maty. Tahaka ny seranan-tsambon'ny morontsiraka atsinanana, ny an'i Baltimore dia nanana- ary mbola manana- olana lehibe amin'ny fananganana silt. Tsara vintana ho anay, nanana tombony lehibe izahay: ny dredge dia noforonina eto.
Ireo mpivarotra koba John sy Andrew Ellicott, izay ny sambo no mitaky seranan-tsambo anaty hitaterana ny entany, amin'ny ankapobeny dia voatonona ho voalohany nampiasa dredge crude handavaka ny seranan-tsambo, nanomboka tamin'ny 1783. (Ary raha ny marina, Ellicott Dredges monina any Baltimore mamokatra fitaovana anio.) Fa i Capt. Stephen Colver sy ny endrika noforoniny tamin'ny 1798 izay nanatsara ny seranan-tsambo. Araka ny voalazan'i Kummerow, ny antsamotady nataon'i Colver, izay lakana mitsingevana miaraka amin'ny "scoop" izay ampandehanan'ny soavaly na lehilahy izay nitodika volo-dranomaso, dia mety haka fotaka 25 metatra toratelo isaky ny scoop. Colver dia nomena karama 1 isan-jato isaky ny fotaka toratelo natsangan'ny ekipany, ka nahazoana vola karama mihoatra ny $ 5,800 isan-taona ny kapiteny.
Ho an'ny mpiasany, asa ratsy izany amin'ny lafiny rehetra, "Iza no mahatanty ny fofona fotaka natsipy tamin'ny toetr'andro mafana teo amin'ireo trondro?" mpanonta gazety no mihevitra. Nandritra ny ririnina dia nitady alikaola be dia be tamin'ny mpiasa i Colver mba hiasa sy hafana hatrany.
Tamin'ny taona 1806, tamin'ny fiezahana nitahiry vola dia nividy an'i Colver ny tanàna ary nametraka "mpitantana ny milina fotaka" hanara-maso ny asa. Ny ezaka dia nitahiry $ 3,141 isan-taona ary ny seranan-tsambo, tamin'ny alàlan'ny "milina fotaka" efa nandroso, dia nitahiry ny fitetezana – ary nahomby – hatrizay.